၂၁ ရာစု ပင်လုံ ဒုတိယ အစည်းအဝေးမှာ အမျိုးသမီးပါဝင်မှု ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ဒုတိယ အစည်းအဝေးမှာ အမျိုးသမီးပါဝင်မှု ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိ
epa05996872 Myanmar ethnic people go throughasecurity inspection before attending the closing ceremony of the second session of the 'Union Peace Conference - 21st century Panglong' in Naypyitaw, Myanmar, 29 May 2017. The conference aims at ending violence between Myanmar's Army and ethnic armed groups. EPA/HEIN HTET
၂၁ ရာစု ပင်လုံ ဒုတိယ အစည်းအဝေးမှာ အမျိုးသမီးပါဝင်မှု ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိ
ကျင်းပပြီးစီးသွားတဲ့ ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ဒုတိယ အစည်းအဝေးမှာ အမျိုးသမီး ပါဝင်မှု ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပြီး အရင်ကထက် စာရင် ပိုများလာတယ်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကျားမတန်းတူရေး မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AGIPP) က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
သတင်းဓာတ်ပုံ – HEIN HTET/EPA
၂၁ ရာစု ပင်လုံ အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ၇၄၀ အနက် အမျိုးသမီး ၁၄၆ ဦး ပါဝင်ပါတယ်။ ၂၁ ရာစု ပထမအကြိမ် ပင်လုံ အစည်းအဝေးထက် ပိုများလာပေမယ့် မျှော်မှန်းထားတဲ့ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကို မရောက်သေးဘူးလို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
၂၁ ရာစု ပင်လုံ အစည်းအဝေးမှာ ပါဝင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်စားလှယ်၊ ကူညီပံ့ပိုးသူ၊ ကျွမ်းကျင်နဲ့ လေ့လာသူတွေအဖြစ် တက်ရောက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleလျှပ်စစ်ဓါအားပေးဝေမှုမှာ တစ်ယူနစ်ကို ၂၁ ကျပ်နှုန်းနဲ့ အစိုးရက အရှုံးပေါ်နေ (ရုပ်/သံ)
Next articleဒီပဲယင်း အရေးတော်ပုံ ၁၄ နှစ်ပြည့် အောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ် (ရုပ်/သံ)